''Abbootiin Senegaal daa'imman akka dudgdatti baadhatan taasiseera'' - BBC News Afaan Oromoo
''Abbootiin Senegaal daa'imman akka dudgdatti baadhatan taasiseera''
Goodayyaa suuraa Biraamaa, injinara fi daa'ima isaa Indeeyee
Maartaa Moreeraasifi dhimma isheen suuraa irratti kaastu- abbootii daa'imman dugdattii baatan-yeroo isheen daandiiwwan magaalaa guddoo Seneegaal irratti suuraa isaanii kaastu qalbii namootaaa hawwate.
''Namooti harka walitti rukutaa turan-takka takka namni gara malee waan walitti kubbuuf suuraa kaasuun illee xiqqoo na rakkisee ture.'' jechuun ogeettiin suuraa Ispaanish BBCtti himtee jirti.
''Dubartoonni hundi: 'ishoo ishoo anis dhaqeen abbaa warraa koo waama, kuni waan yeroo hunda arginu miti''
Moreeraasiinis jaatanii(project) kana sababiima kanaaf jalqabde, dorgommii suuraa 'Sony World Photography Awards Professional' dhaanillee sadarkaa dhumaarraa geessee jirti.
Yaadicha kan argatte suuraalee bara 2008tti Senegaalitti kaaste otoo ilaaltuuti.
Goodayyaa suuraa Kumbaafi daa'imashee Bintaa-kuusaa Moreeriis keessaa
''Booda kana maalin baree suuraa haadholii daa'imman dugdatti baatanii kuumaatamaanin qaba, maaliif kan warra dhiiraa hin qabu jedheeman na ajaa'ibe.''
Hiriyyootashee Senegaal warra dhiiraa, daa'imman qaban yeroo bilbilteef manatti yoo taheef dugdatti akka baataniifi suuraa ka'aniifi addabaabaaayittii garuu tasumaa akka hin goone itti himan.
''Asitti waanti gola keetti gootuufi gadi baatee waan raawwattu gidduu garaagarumma guddaatu jira- maal naan jedhuun baayyee dhiibbaa qaba'' jetti Moreeraasii
Goodayyaa suuraa Dembaa, gorsaa maallaqaa, daa'imsaa Eliiy waliin
Haa tahu malee qorannoon ishee dhiiroti daa'imman kunuunsuu irratti qooda guddaa akka qaban agarsiisa, Daakaar gatiin jireenyaa qaalii waan taheef haati warraafi abbaan warraa hojii hojjechuu qabu.
Kunimmoo akka isaan jiruu addaan hiratan dirqisiisa.
''Abbootii suuraa kanarratti hirmaatan ijoollee isaanii akka hordofaniifi manatti akka gargaara gaafadheen: '' Eeyyee nan gargaara haati warraa koos hojii waan qabduuf jiruu isa mana keessaa hunda qofaa ishee hojjechuu hin dandeessu.''
'' Garuu suuraa abbootii ijoollee isaanii waliin otoo taphatanii, mana barumsaaa yeroo geessan, dhaqna yoo dhiqan hin argitu'' jetti
Goodayyaa suuraa Cheehikaa, ogeessa viidiyoo, fi daa'imasaa Zowii
Akkasitti dha egaa namoota gaaffiifi deebii waliin taasiste suuraa isaan kaasuuf kan amansiifte
''Akksiin jedhee: ''Tole egaa, jiruun keessan kuni ifatti ba'ee akka mul'atuuf- daa'ima keessan waliin suuraa isin kaasuun barbaada''
Goodayyaa suuraa Julees, ogeessa kompitaraa, fi daa'imasaa Jeed
Yeroo suuraa ka'uuf walii galan daa'ima isaanii irree isaanii irratti otoo hin taane dugda isaaniitti akka baataniif gaafatte- isaaniis waliigalan alattin suuricha isin kaasa yoo jettu garuu baayyeen isaanii daa'ima keenya daandiitti baasnee dugdatti hin baannu jedhan.
Boodarra garuu Moreeraasiin ittuma cichitee gaafachuunsheen waan gaarii deebiseef.
''Miirri namoota karaarraa baayyee namatti tola ture, warra suuraa isaan kaasaa ture keessaas boodarra baraa dhufe''
Goodayyaa suuraa Mowuulaayee, qindeesaa muuziqaa, fi ijoollee isaa Maalikiifi Hasan
Suuraawwan isheen baatii lamaan sadan darban keessatti kaaftees Caamsaa darbe agarsiisa Dak'Art, itti dhiyaatanii turan.
Suuraawwan kunneen ijoo dubbii tahanii turan.
Goodayyaa suuraa Mohaammad, ogeessaa kaameeraa, fi daa'imasaa Zakkaariyaa
''Namooti agarsiisicha dhufan baayyeen isaanii dhiirota turan, dhiirummaa gaarii tahes agarsiifachaa turan'' jetti
''Yeroonsaas yeroo isaan reefu abbaa itti tahan ture'' jetti Moreeraas
Keesumaa suuraan tokko kan raapparii beekamaa gatii tureef dhiibbaa guddaa qaba ture.
Goodayyaa suuraa Baaduu, raapparii, mucaa isaa Mahaammad Baaduu
''Namooti baayyee waan isa beekaniif, suuraa warra kaanirraa salphaatti adda isa baasu ture. Namooti maqaa qaban hirmaachuun isaanii daa'ima isaanii ifattii baatanii mul'chuun rakkoo akka hin qabne himuuf fakkeenya tahu.''
Namooti beekamoo muraasni maqaa isaaniif jecha irratti hirmaachuu akka ishee didan dubbatti.
Dorgommii suuraa jiruu loltootaa mul'ise
Agarsiisa suuraa Oromoo 'isa jalqabaa'
Ogeettiin suuraa kuni jaataniin ishee kuni 'waan dhaabbatu miti' jetti
''Ammas hojjechuu koo ittan fufa- abbootii bartee isa haadha qofatu daa'ima kunuunsa jedhu cabsan baayyeen jiraachuu isaaniin gammadduu dha. Akkuma suuraa warra dubartii ijoollee waliin argaa jiraanne, kan warra dhiiraas hanguma kanaa aragchuu qabna.
Goodayyaa suuraa Iskoorpiyoon, ogeessa hojii mukaa, fi daa'ima isaa Afrikaa
Suuraan: Maartaa Moreeraas
Dorgommii Suuraalee Waraanaa kan bara 2018